Chinja vhidhiyo kuita mifananidzo kubva kuLinux neffmpeg | Linux Vakapindwa muropa
Chinja vhidhiyo kuita mifananidzo kubva kuGNU / Linux
Kana iwe uri kufunga nezvekushandura vhidhiyo kuita mifananidzo, furemu nefuremu, ikozvino unogona kubva kuGNU / Linux nerubatsiro rweiyo ffmpeg chishandiso. Ichi chishandiso chinonakidza kwazvo, kwete cheiri chete basa, asiwo shandura pakati pemavhidhiyo mafomati, nezvimwe Isu takatotaura nezvazvo pane dzimwe nguva, asi ikozvino isu tinotsanangura maitiro ekushandura firimu kuita zvifananidzo.
Zvichida nekuti iwe unoda kuwana mufananidzo wewaunofarira bhaisikopo, nekuti iwe unoda kuwana furemu yevhidhiyo yekushandisa sechivharo kana nekuti uri kufarira kutora mafuremu evhidhiyo kuti ugone kuachengeta semifananidzo, iyo Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita ndeche gadza ffmpeg kana iwe usati watoisa.
Kamwe yaiswa, unogona shandisa unotevera kuraira:
kubudikidza ejemploFungidzira kuti iwe unoda kuendesa vhidhiyo yauinayo muDownloads dhairekitori inonzi wedding.mpg kune PNG mifananidzo inonzi fotoX (uko X iri nhamba) uye iyo inochengetwa mudhairekitori inonzi mafuremu. Kune izvi isu tingaite zvinotevera:
Izvi isu yaizogadzira dhairekitori ine mifananidzo yakawanda anonzi photo01.png, photo02.png, nezvimwe. Saka kusvikira vhidhiyo yacho yapera mufananidzo nemufananidzo kuti ugone kuishandisa sechivharo, vagadzirise uye ugadzire vhidhiyo nemamwe software senge OpenShot, nezvimwe.
Ndinovimba izvi zvakubatsira tutorial, kana uine dambudziko, mubvunzo kana mubvunzo, Siya mhinduro uye ndichaedza kukubatsira zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Chinja vhidhiyo kuita mifananidzo kubva kuGNU / Linux
Elpidio Moreno akadaro
Kwaziso, maita dzidziso. Kuenderera mberi neFFmpeg theme, zvinoita here kushandisa NVENC kukurumidza kukodha?
Pindura Elpidio Moreno
Kana zvichibvira ... Unogona kutarisa izvi:
Ndine urombo kuti ndisakubatsire zvakare, asi ini handishandise NVIDIA GPUs uye handina kumbobvira ndave nayo. Zvisinei, kana uine kusahadzika kana chero mubvunzo, taura kuti uone kana ndichigona kukupa tambo.
Able2extract v9.0 inowanikwa yekumisikidza